Svondo 7 Kurume 2021
Kuvheneka Kutenda kuti zvinokwanisika kukura uye kusiyanisa masikirwo emhando zvakasikwa pasina kuvhiringidza chimiro chavo uye kutaura kwavo nekuwirirana, uye kuti vanhu vane hukama hwakafanana nehwezvisikwa mafomu, Yılmaz Dogan akataura kuti panguva yekugadzira Thorn, aida kuratidza kukura nemafomu ayo tevedzera zvisikwa pasina chero chinhanho chinogumira mukuvhenekerwa. Mhinzwa, inova inosimudzira bazi remusango reMhinzwa; inokura mune yakasarudzika chiumbirwo uye inoumba chisikwa, inosangana nezvinodiwa zvakasiyana uye isina muganho wekukura seyakanaka taa dhizaini.
Mugovera 6 Kurume 2021
Tafura Yılmaz Dogan, uyo akatanga nepfungwa yekuti akasiyana maindasitiri zvigadzirwa zvinogona kushandiswa pamwechete patafura yetafura, akataura kuti akagadzira shanduko mune dhesiki rako iwe unogona kuita shanduko kuti uenderane nemaitiro akasiyana chero nguva. Nechimiro chayo chinogona kuputswa, Patchwork idhizaina yekushongedza inokwanisa kuenderana nenzvimbo dzakasiyana sekudyira nematafura emisangano.
China 4 Kurume 2021
Kunyura Washbasin inotaridzika sedanda rakagadzirira kutumbuka uye ichizadza: iri bhuru kwazvo zvekuti yakagadzirwa kubva kumubatanidzwa une hunyanzvi wehuni yakasimba yemuti uye teak, chinhu chiri muchikamu chepamusoro uye chimwe mune yakadzika. Mutambo wakasimba uye wakachengeteka, uchipa hunhu hwakasarudzika hwekubata uye ruvara rwehupenyu nekudyidzana kunofadza kwezviyo zvine hugaro hwakasiyana hwese hunoburitsa washbasins dzakasiyana. Runako rwechinhu ichi runoratidzwa neasymmetry uye kuwirirana nekusangana kwemhando dzakasiyana uye huni hunhu.
Kuvhenekera Uye Kurira Kwemaitiro
Chipiri 2 Kurume 2021
Kuvhenekera Uye Kurira Kwemaitiro Luminous yakagadzirirwa kupa ergonomic magetsi ekugadzirisa uye inotenderedza mutsindo system mune chimwe chigadzirwa. Inoitirwa kugadzira manzwiro ayo vashandisi vanoshuvira kunzwa uye kushandisa musanganiswa weinzwi uye nechiedza kuzadzisa ichi chinangwa. Iyo ruzha system yakavakirwa pahwaro hwekuratidzira kweinzwika uye inofungidzira 3D kutenderedza ruzha mukamuri pasina kukosha kwe wiring nekuisa matauri mazhinji akatenderedza nzvimbo. Sechiedza chependant, Kuvhenekera kunogadzira kuvhenekera uye kwakananga. Iyi nzira yekuvhenekera inopa yakapfava, yunifomu, uye yakaderera mutsauko inodzivirira glare uye matambudziko ekuona.
Kuvheneka Tafura Tafura Yekofi Yacht Kunyura Kuvhenekera Uye Kurira Kwemaitiro